Efrata ọgwụ na -arụ ọrụ
Imidazoles nke Anthelmintic
Ihe ndị ọzọ dị ndụ
Ndị na -ere ọgwụ
Ndewo, Nabata na Hebei Binshare New Material Co., Ltd!
PFAS kemịkalụ metụtara Covid-19 filter SVG
site na nchịkwa na 21-07-05
Dabere na ọmụmụ ndị Denmark nyochara ndị ọgbọ, ọkwa dị elu nke ogige PFAS jikọtara ya na ụdị Covid-19 dị njọ karị. Ọmụmụ ihe a metụtara ndị ọrịa 323 bu ọrịa coronavirus wee chọpụta na ndị nwere ọkwa kemịkalụ dị elu akpọrọ PFBA nwere ike karịa…
Okwu mmalite na ntinye nke potassium dicarboxylate
Potassium dicarboxate dị mkpa dị ka onye na -akwalite uto n'ihi nchekwa ya na ọrụ antimicrobial, ha abụọ dabere na nhazi ya dị mfe na pụrụ iche. Ihe mejupụtara ya bụ formic acid na potassium formate na -apụtakarị n'okike na n'ime eriri afọ ezì, ma emesịa mebie ...
Hebei binshare New Material Co. ltd nyocha ma mepụta ngwaahịa ọhụrụ: calcium propionate, calcium acetate.
Ojiji Calcium Acetate: Ndị na -egbochi ya; Ndị na -eme ka ihe kwụsịlata; Ihe nchekwa; Ndị na -eme ka ihe na -atọ ụtọ ụtọ; Ndị nchekwa; Ndị na -eme nri na -edozi ahụ; ndị na -achịkwa pH; Ndị ọrụ chelating; Enyemaka nhazi; Ejikwa ya na njikọ nke Acetate. Dị ka mgbakwunye calcium kacha mma, ọ na -ejikwa na ọgwụ na reagents kemịkalụ. Ọ bụrụ na ị ...
Na -ezipụ ajụjụ
Maka ajụjụ gbasara ngwaahịa anyị, biko hapụ anyị email gị wee kpọtụrụ anyị n'ime awa 24.